Kupera kwedenho. Isa maviri asiri maLinux anoshanda masystem | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe wakarasikirwa nezvakamboitika zvinyorwa, ini ndinokuudza iwe kuti chii chinetso chinosanganisira. Zviri zvekutanga gore kuisa 12 zvirongwa iwe zvausingazowanzo gadza, kana kuvapa shandisa iyo iwe yausingazowanzo kupa kune avo iwe watove wawakaisa. Iwo maLinux repositori ane hombe nhamba yezvirongwa zvatisingazive isu. Uye kune izvo isu tinofanirwa kuwedzera izvo zviri muSnap, Flatpak, Fomati fomati kana inogona kutorwa pasi kubva kunzvimbo dzakaita seSourceForge, Fosshub kana GitHub.
Zvisinei, kana mirawo yakanyorwa mumatombo, kana kuipihwa pamusoro peGomo reSinai. Kana iwe ukaverenga izvo 3 zvinyorwa zvakapfuura, iwe uchaona kuti ini ndanga ndichiita misiyano sezvandaifambira mberi. Uye iwe unogona kuita zvakafanana kuti zviwedzere kunakidza.
Ingo rangarira izvo isu tinokuda iwe kuti utiudze muchikamu chemashoko wakaitei.
1 Kupera kwedenho. Maitiro maviri asiri eLinux anoshanda.
1.3 Hardware zvinodiwa
Kupera kwedenho. Maitiro maviri asiri eLinux anoshanda.
Pakutanga gore rino ndanga ndichinyunyuta kuti hapana chinhu chinoshamisa muLinux zvekare. Shanduro dzinoteedzana pasina shanduko dzakakodzera. Neraki, iyo nyika yeakavhurika sosi inotipa dzimwe nzira kune avo vedu vanofarira kuita googling kwemaawa maviri kuti vakwanise kushandisa purinda kana kuita system yakaturika nemasekondi makumi matatu kupedzisa kuisirwa.
Kana aripo masisitimu anoshanda achiita kunge akaremera iwe, iwe unofanirwa kupa KolibriOS kuyedza.
Iyo diski nzvimbo yaunoda kuyerwa mumamegabyte, akafanana neiyo RAM yakakosha pakushanda kwakakodzera, chete 8 megabytes.
Asi, usafunge kuti izvi zvinotadzisa mashandiro zvachose. Mushure mezvose, muma80s isu takakwanisa kushanda nekutamba ne64 kb.
Pakati pezvikumbiro zvinosanganisirwa zviripo izwi processor, muoni wemifananidzo, graphic edhita, webhu browser uye inopfuura makumi matatu mitambo.
Ehezve, hazvisi zvese zvakakwana. Kolibri Iyo chete ine rutsigiro ruzere rweFAT12 / 16/32 faira fomati. Mune mamwe mafomati senge NTFS, ISO9660 uye Ext2 / 3/4 unogona kungoverenga iwo chete.
Nezve kutsigirwa kwe Hardware sIyo inongotsigira chete sarudza mamodheru eIntel uye AMD makadhi emifananidzo. Kunewo zvakare kutsigirwa kushoma kwemamwe mamodheru eodhiyo uye network network. Nezve kubatanidza, inogona kushanda ne USB 1.1 uye 2.0.
Kunyanya izvo ino inoshanda haina kuiswa. Iwe unofanirwa kuikopa kuFat partition uye kugadzirisa Grub na
KolibriOS yakanyorwa mumutauro wegungano uye yakazvarwa seforogo yeimwe inoshanda system inonzi MinuetOS. Parizvino, yakawanda yekodhi yako iri yakaburitswa pasi pe rezinesi reGPLv2.
Haiku ndizvo rakafuridzirwa neBeOS, sisitimu yekushandisa yakagadzirwa muma90 yakagadziriswa midhiya mharidzo. Nezve iyo inoshanda system yatiri kutaura nezvayo, inotarisira kushanda zvakanaka, nekukurumidza, nyore kushandisa uye zvakajairwa chinangwa. Inoitirwa kushandiswa pamakomputa ako ega.
Iyo x86 32-bit vhezheni yeHaiku inoda a Pentium CPU kana yakakwira iine 256 MiB ye RAM (sekureba sekunge memory chaiyo inogoneswa), 1,5 GiB yenzvimbo yekuchengetera uye VESA-inoenderana vhidhiyo kadhi. Asi kuti uwane zvakanyanyisa kubva muchirongwa chekushandisa, zvakanakisa kuve neinenge Pentium4 ine 512 MiB ye RAM uye 2 GiB yenzvimbo yekuchengetera. Kugadzira Haiku mukati mawo, 2 GiB ye RAM inokurudzirwa.
Haiku ane yakakura Hardware rutsigiro kupfuura KolibriOS, zvikuru nekuda kwekuti inogona kushandisa madhiraivha akagadzirwa eFreeBSD. Pane iyo webhusaiti webhusaiti, kune zvakare gwara rekuti ungaiisa sei mune chairo muchina.
KuHaiku hapana kushomeka kwekushandisa. Iyo ine yayo pasuru maneja uye zvirongwa zvinogona zvakare kutorwa pasi yesoftware saiti yakatsaurirwa kuBeOS. Iyo inogona zvakare kumhanya Java, Python, uye Ruby kunyorera.
Mazhinji emapurogiramu aripo ndeekuzivana kwekare. Pakati pemahofisi emahofisi pane LibreOffice uye Calligra. Kana iwe uchida mimhanzi unogona kushandisa Cantanta y Clementine kana iyo Openshot vhidhiyo mupepeti. Zvimwe zvakanangana nehurongwa hwekushandisa. Kana, sezvatakataura, zvichibva kuBeOS.
Haiku inowanikwa pasi peMIT rezinesi uye inogona kuyedzwa muhupenyu mode, yakaiswa mumuchina chaiwo kana pakombuta yedu. Zvisinei, chirongwa ichi chiri mubeta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kupera kwedenho. Isa maviri asiri maLinux anoshanda masystem
Pa6th ini ndichapedzisa maitiro andinoisa mana masisitimu mune yekare pentium 4 ine icing pane keke MX Linux kuvatonga ivo vese.
Munguva yakapfuura ndakafanirwa kuisa 5.
Unoita sei kuti firefox ishande? Ini ndinowana meseji inoti kana ndikasachinja processor, handikwanise kufamba. pamwe naMxlinux.
Nekuti kana ini ndikaisa Linux padhuze neWindows uye ndofunga kubvisa Linux, Windows haichashandi
Kana uri mubvunzo, imhaka yekuti unofanirwa kudzorerazve Windows bootloader.
Uine Windows yekuisa diski unofanirwa kupa Windows kutanga kugadzirisa uye iyo inodzorera iyo mbr.
Dambudziko rekuisa OS rakasiyana (ndoda yakavhurwa sosi), kune iyo inouya kubva kufekitori, ingangoshayikwa pamidziyo yakasiyana, semaTV, mapiritsi, mabhokisi eTV;) nezvimwe.
Ini ndakambotenga piritsi rakachipa kuisa Ubuntu Kubata pairi. Yakanga yakachipa kwazvo zvekuti ndakatadza kuziva kuti ndoidzura sei. Asi, iri bhizinesi rangu risina kupera
Ndatenda nerondedzero yako muchinyorwa chekutanga.
Kana zviri zvekupedzisira, tinogona kuzviita pasi peVirtual Bhokisi?